कोरोना संक्र`मित नेपाली मुल्ला मोल्बी भारतको अस्पतालबाट फरार ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कोरोना संक्र`मित नेपाली मुल्ला मोल्बी भारतको अस्पतालबाट फरार !
कोरोना संक्र`मित नेपाली मुल्ला मोल्बी भारतको अस्पतालबाट फरार !
काठमाडौं । भारतमा कोरोना संक्र`मण फैलाएको भनिएको केही हप्ता अघि भएको एक मुस्लिम धार्मिक भेलामा सहभागी एक नेपाली अस्पतालबाट भागेर नेपाल छिरेको आशंका गरिएको छ । दिल्लीको निजा मु`द्दिन क्षेत्रमा भएको तबलिगी जमात भेलामा सहभागी सुनसरीका जमाती मुल्ला मोल्बी उत्तर प्रदेशको बागवत अस्पतालबाट उपचारकै क्रममा फरार भएका छन् । उनी अस्पतालबाट भागेर नेपाल छिरेको आशंका गरिएको छ ।
उनी अस्पतालबाट फरार भएपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । अस्पतालबाट फरार भएका उनीबाट थप सं`क्रमण फैलाउन सक्ने भन्दै समाचार दिइरहेका छन् । उनले धेरै जनाले कोरोना संक्र`मण फैलिन सक्ने आंशका गरिएको छ । यसतर्फ सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र अन्य अधिकारी सचेत रहनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । सामाजिक सञ्जा`लमा उनको नाम र तस्बिर पोष्ट गरेर ‘देखेमा प्रहरीलाई खबर गर्नू’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।उक्त भेलामा तीन हजारभन्दा बढी मुस्लिम प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । जसमा नेपाली २० भन्दा बढी सहभागी भएका थिए ।
महोत्तरी जिल्लाको एक गाउँको एक घरमा सोमबार १५ भारतीय किशोर लुकेर बसेको अवस्थामा फेला परेका छन् । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा सङ्क्र`मणबाट बच्न तथा बचाउन नेपाल सरकारले लकडाउन गर्दै सीमानाकासमेत बन्द गरेको अवस्थामा १५ किशोर सीमापारिबाट चोरबाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेर महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका–५ बहेडा गाउँमा आएर लुकेर बसिरहेको अवस्थामा फेला परेका हुन् ।`उनीहरु यही चैत २२ गते राति वनको बाटो हुँदै भारतको सीतामढी शहरबाट बहेडा गाउँमा आइपुगेका हुन् । तेह्र वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका ती किशोर भारतको बिहारमा पर्ने किशनगञ्ज जिल्लाका हुन् ।
एकै घरमा फेला परेका ती सबै किशोरको तत्काल गाउँपालिकाको स्वास्थ्य टोलीद्वारा ज्वरो जाँच गर्दा अवस्था सामान्य रहेको पाइएको थियो । उनीहरुलाई तत्काल छुट्टै होम क्वारेन्टाइनमा १४ दिनसम्मका लागि राखिएको अध्यक्ष साहले बताउनुुभयो । यता सीमाक्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सहितको सुरक्षाकर्मीको २४ घण्टे ड्यु`टी र कडा निगरानी रहेको बेला भारतीय किशोर समूहमै नेपाल प्रवेश गरेकामा उनीहरुको कामप्रति प्रश्न चिह्न उठेको छ । साथै स्थानीय बासिन्दा र वडाध्यक्ष समेतले गाउँमा नयाँ मानिस आएको कुरा प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी नगराएर ठूलो लापरवाही गरेको आरोप सर्वसाधारणले लगाएका छन् ।
मास्क नलगाई हिंड्नेलाई ५० देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना